မန္တလေးမြို့သို့ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသည် ဝင်ရောက်နှုန်း တိုးတက်မှုနှင့်အတူ လေးနှစ်ကျော် ကာလ?? - Yangon Media Group
မန္တလေးမြို့သို့ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသည် ဝင်ရောက်နှုန်း တိုးတက်မှုနှင့်အတူ လေးနှစ်ကျော် ကာလ??
မန္တလေး၊ ဇွန် ၆
မန္တလေးသို့ နိုင်ငံခြားသားခရီးသည်ဝင်ရောက်မှုနှုန်းမှာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် တိုးတက်လာသည်နှင့်အညီ ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ တည်းခိုရိပ်သာများ၏အ ရေအတွက်မှာ လေးနှစ်ကျော်ကာလအတွင်း သုံးဆကျော်အထိမြင့်တက်လာပြီး နိုင်ငံတကာခရီးသွားလုပ်ငန်းပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုင်စင်များအမြန်ဆုံးချထား ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
”လွန်ခဲ့သောလေးနှစ်ကျော်တုန်းက ဒီဇင်ဘာလနဲ့ ဇန်နဝါရီလအချိန်ဆို တည်းခိုဖို့အတွက် အခန်းမလုံလောက်တာတွေရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်တုန်းက မန္တလေးမြို့ မှာ ဟိုတယ်အလုံးရေ ၇ဝ သာရှိခဲ့ ပေမယ့် ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေ များ ပြားလာရာမှ အခုတော့ ဟိုတယ် တည်းခိုရိပ်သာ ၂ဝဝ ကျော်အထိ ရှိလာပါပြီ။ အခန်းအရေအတွက် ၁ဝဝဝဝ ကျော်ကျော်ရှိပြီး ဝန်ဆောင် မှုပိုင်းဆိုင်ရာယှဉ်ပြိုင်မှုတွေကြောင့် ခရီးသည်တွေအတွက် စိတ်ကျေနပ်မှုများစွာရရှိစေပါတယ်။ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနဘက်က လိုင်စင်တွေအမြန်ဆုံး ချပေးလျက်ရှိပါတယ်”ဟု မြန်မာနိုင်ငံဟိုတယ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (မန္တလေးဇုန်) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမင်းခိုင်က ဇွန် ၆ ရက်တွင် ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောကြားသည်။
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တည်ဆောက်မိန့်ရ ရှိ၍ အဆောက်အအုံတည်ဆောက် ပြီးစီးပါက လိုင်စင်လျှောက်ထားရ မည်ဖြစ်ကာ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီပါက လိုင်စင်အတွက် ထောက်ခံချက်ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ”ခရီးသည်တွေတည်းခိုနေထိုင် ဖို့ အခန်း ၁ဝ ခန်းကနေ အခန်း ၂ဝ အထိရှိတယ်ဆိုရင် တည်းခိုရိပ် သာလိုင်စင်ကိုချထားပေးတာဖြစ် ပြီး အခန်း ၂ဝ အထက်ရှိတယ်ဆိုရင် ဟိုတယ်လိုင်စင်ကို ချထားပေးပါတယ်။ ဟိုတယ်လိုင်စင်က နှစ် နှစ်သက်တမ်းဖြစ်ပါတယ်”ဟု အဆိုပါ ဦးစီးဌာန (အထက်မြန်မာပြည် ဌာနခွဲ) လ/ထ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစန်းယုက ပြောသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံခြားသားခရီးသည် ၄၈၃၇၈၄ ဦးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ယခု ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ဦးရေ ငါးသိန်းဝင်ရောက်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း ယင်းဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
အောင်လံမြို့နယ် အတွင်း မိုးရွာသွန်းမှု နောက်ကျသဖြင့် တောင်သူများ နှမ်းစိုက်ပျိုးမှု လျော့န??
ကလေးမြို့ ရာဇဂြိုဟ်ဆည်မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဇွန်လအတွင်း ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရန် စီစဉ်နေဟုဆို
ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ တရားမဝင် ဝင်ရောက်လာသူများကို အကျဉ်းထောင်နှင့်တူသော နေရာများတွင် ထိန်း
ကွင်းလယ်လူ ရမ်ဆေး တံကောက်ကြော ဒဏ်ရာ ရခဲ့ကြောင်း ဝင်းဂါး အတည်ပြု
ပလတ်စတစ်အိတ် သုံးခြင်း လျှော့ချ ရပ်ဆိုင်းကြပါတော့
နယူးကာဆယ်နှင့်ပွဲမှ ခြေစွမ်းဖြင့် အက်ဖ်အေဖလား မရနိုင်ဟု ကွန်တီ သတိပေး
မိမိဆုံးဖြတ်ချက် မှားယွင်းခဲ့ကြောင်း ဒိုင်လူကြီး ဂျွန်မော့စ် ဝန်ခံခဲ့ဟု လီဗာပူးနည်းပြ ဂျာ
ချစ်သူမရှိပါဘူး ကျွန်တော် Single ပါ ဆိုတဲ့ အုပ်စိုးခန့်